Archive du 20180227
Fifidianana Araha-maso akaiky ny volan’ireo kandida
Zava-baovao amin’ny fifidianana ho avy manaraka eto Madagasikara ny fametrahana fepetra manokana momba ny loharanom-bola sy ny fampiasam-bolan’ny kandida ary ny fanaraha-maso izany ataona vaomiera manokana, araka ny hita ao amin’ny volavolan-dalàna fehizoro laharana 05/2018 navoaka ny 21 febroary 2018 momba ny fepetra ankapobeny amin’ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara.
Fampihavanam-pirenena Adino tanteraka
Mbola lavitry ny kitay ny afo amin’ny resaka fampihavanam-pirenena amin’izao. Raha ny marimarina kokoa dia fampihavanana politika satria ny mpanao politika no tena miady sy mifanjinja miteraka fahapotehan’ny firenena sy loharanon’ny krizy eto izay miseho isaky ny folo taona eo ho eo.
Admistratera sivily Tokony hijanona manao ``contrôle de legalité`` fotsiny
Hafa noho ny hafa ity fitondrana iray ity. Tompondaka amin’ny fihetsiketsehana ivelany ary mihamazava ny paik’ady nametrahana ireo “ministres-coach” sy prefets misava ny lalana ho an’ny antoko HVM mba handresen-dahatra sy haka ny fon’ny mponina manerana ny nosy.
Fanamboaran-dàlana Talatamaty -Ivato Nangoron’entana ny Sinoa
Nangoron’entana ny sabotsy 24 febroary lasa teo ny orinasa sinoa nahazo ny tsenan’asam-panjakana hanamboatra ny lalana mihazo an’i Talatamaty, Ambohidratrimo sy Ivato iny, raha ny loharanom-baovao.
Amboary ny karatra
Miarahaba anao ry jean a..arahabaina ihany koa aloha fa tonganareo eny Tsimbazaza ihany ilay fandehan-javatra ny farany e.
Fanaovana taratasy eto Madagasikara Mbola tena mandany vola sy fotoana
Tsy fantatra intsony raha ny fandaminan’ny tompon’andraikitra no sarotra arahina na ny olom-pirenena no miaina ao anaty fahasarotana ankehitriny. Amin’izao fotoana izao mantsy, sarotra ny manamboatra taratasy eo anivon’ny biraom-panjakana.
Fanadinana ho mpianatra mpitsara Hesorina ireo mpiadina saika hanao kolikoly ?
Mbola miteraka resabe hatramin’izao ny fanafoanana ny fanadinana hidirana ho mpianatra mpitsara sy mpiraki-draharahan’ny fitsarana na ny ENMG noho ny resaka kolikoly. Efa nesorina ny tompon’andraikitra voalaza fa voakasik’izany, toy ny Tale ara-bola na ny DAF.
Ady amin’ny tsy fananan’asa Mila paikady matotra
Omaly no natao tetsy amin’ny Hotely Ibis Ankorondrano ny fikaonan-doha arahina adihevitra nataon’ny ivontoeram-panofanana ara-diplomatika sy stratejika (CEDS).
Ankizy mitsoaka ny tokantrano Tovovavy no tena maro an’isa
Misy hatrany ireo ankizy mitsoaka miala ny tokantranon-dray aman-dreniny amin’izao.
Maitre Avoko sy ny Kung-Fu Wisa Vonona hiatrika ny raharaham-pirenena
Maitres Kung-fu zandriny miisa 1 223, solontena iray avy isaky ny Kaominina Manerana an’i Madagasikara no tonga nanatrika ny fiofanana izay nifarana ny sabotsy alahady lasa teo, teny amin’ny Temple de Pierre Mizael teny Ambatomirahavavy.
Fifidianana filohan’ny FMF Mitambara sy mifanampia ianareo, hoy i Tôta
Somary nampitsamboatra ny maro ihany ny nanambaran’ny filohan’ny ligin’ny baolina kitra eto Analamanga teo imasom-bahoaka tetsy Mahamasina tamin’ny sabotsy 17 febroary lasa teo.
Rugby “Comité Technique Fédérale” Omby 4 no nivoaka teny amin’ny kianja Makis
Ankoatra ny tetsy Malacam Antanimena dia mitohy ihany koa ny lalao rugby karakarain’ny CTF na “Comité Technique Fédérale” teny amin’ny kinja Makis Andohatapenaka tamin’ny alahady 25 febroary lasa teo.
Nalaza ho firenena hafakely efa hatry ny ela i Madagasikara. Naha hafakely azy fahizay ny hakanton’ny natiora ao aminy.
Lalamby Anosibe Vehivavy iray nofaohan’ny lamasinina
Vehivavy iray nitaiza kely sahabo ho 35 taona teo ho eo no nofaohan’ny lamasinina tetsy amin’ny lalamby Anosibe, omaly alatsinainy maraina tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany.
Polisy iray misahana ny fifamoivozana no naato tamin’ny asany ny faran’ny herinandro teo noho ny fikasihan-tanana nataony tamina mpitondra moto tsy nanao aroloha tany amin’ny tanànan’i Ziguinchor.
Fidangan’ny faktiora Jirama Ahiana hitarika fipoahana ara-tsosialy
Mbola miteraka resabe eny anivon’ny fiarahamonina eny ny resaka fiakaran’ny faktioran’ny JIRAMA. Maro ny velon-taraina ary tsy vitsy koa no miaka-pofona mihitsy tamin’ny nafitsoky ny JIRAMA.
Malagasy niasa tany Koweit Mitondra takaitra avokoa ireo tafody
Mitondra takaitra avokoa ny ankamaroan’ireo vehivavy teratany Malagasy niasa tany Koweit tonga velona eto an-tanindrazana. Ankoatra ireo efa nijoro vavolombelona marobe dia vehivavy Malagasy miisa 70 indray no nampodiana an-tanindrazana ny 22 febroary lasa teo.